About Us - U-Hebei Mingda International Ukuhweba Co, Ltd.
Hebei Mingda Inkampani Yezentengiselwano Yamanye Amazwe yinkampani yokuhweba ebhekene nezindawo zokujikijelana, zokuthethelela nezomshini.
Sine nokuxhumana okujulile kwebhizinisi nokwenziwa emadolobheni amakhulu ase China, ngakho-ke siyashintsha futhi sithembela kunoma yiluphi uhlobo lwemikhiqizo yokusakaza ukuze sikwazi ukuhlangana namakhasimende ethu ku-quanlity nesikhathi sokulethwa.
I-Hebei Mingda International Trading Company isebenza njengenkampani ekhethekile emkhakheni wazo zonke izinhlobo zokuphonswa.
LOKHO esingakwenzela kona
Imikhiqizo yethu ifaka zonke izinhlobo zokuphonswa eluhlaza okwenziwe nge-ductile iron, i-grey iron, ithusi, insimbi engenasici kanye ne-aluminium, ama-cast iron made kanye nezingxenye ezakhiwe. Ukwenza lezi zingxenye ngokuya ngemidwebo yamakhasimende, sinezinto zokwakha ezifanelekile ezinjengesihlabathi se-resin, isikhunta sesihlabathi, amabhokisi asisekelo okushisa, i-wax elahlekile, elahlekile-i-foam njalonjalo.
Ngokukhethekile imizimba ye-hydrant kanye nama-valves ', siqoqe isipiliyoni esicebile sale mikhiqizo ekukhiqizweni kwangempela kweminyaka engu-16 edlule, Manje siyaziqhenya ngemikhiqizo yethu enendawo enhle kanye nezinto ezisezingeni eliphezulu. Noma yini, besizama konke okusemandleni ethu ukuhlinzeka amakhasimende ethu ukukhishwa okungcono kwekhwalithi ngokwenza ngcono imisebenzi yezandla nokulawula ikhwalithi ngokucophelela.
Ngaphandle kwezidingo zabathengi, sinehlelo lethu lokuqinisekisa ikhwalithi eliqinile, Lokho kuqinisekisa ukuthi okufunwa ngumthengi kubaluleke kakhulu futhi kungenziwa ngqo ngokuya ngamazinga weKhwalithi yethu eyenziwe ngokwezifiso. Lokhu konga isikhathi esiningi nemali ngazo zombili izinhlangothi. Kusukela kusungulwe kuze kube manje, imikhiqizo yethu iyaqashelwa ngamakhasimende ethu, Ngaleso sikhathi sinegama elihle embonini yokuphonsa kanye nemishini noma ngubani kusuka kumakhasimende noma abalingani bethu.
Manje imikhiqizo yethu ithumela ikakhulukazi eJalimane, eSweden, e-UK, eDenmark, eFrance, e-USA, Middle-East, njalonjalo.
Sinezinketho eziningi zama fektri nezindawo zokusebenza nathi e-China, kusisiza ukuthi sazi ukuthi iziphi izikebhe zokukhiqiza futhi yikuphi ukutholakala okufanelekile emikhiqizweni yethu ethengiwe ngabathengi bethu ngokuya ngemidwebo yabo enikeziwe kanye nokufuneka kwekhwalithi. Ngakho-ke lokhu kusinikeza umkhawulo ngaphezu kwabanye ukuthi abathengi bahlala bethola umkhiqizo ongcono kunawo wonke ngentengo enhle kakhulu yokuncintisana.
UKUKHULULWA / ISIKHATHI SOKUhola
Isikhathi sethu esijwayelekile sokuhola siyizinsuku ezingama-30 kodwa esimweni esikhethekile sokufunwa kwabathengi, Singaqhakambisa ngezinsuku ezingama-20 futhi nje ukuze sisindise umthengi wethu onenani lomthwalo wezindleko zezimpahla zomoya ezingeziwe.
Ufuna Phambili Ukuthola Impendulo Yakho Yomusa Othandekayo Kwasekuqaleni Kwakho!